भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत ह,त्या भएको हो ? परिवार र प्र,ह,रीको बेग्ला बेग्लै खु,ला,सा – Jagaran Nepal
भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत ह,त्या भएको हो ? परिवार र प्र,ह,रीको बेग्ला बेग्लै खु,ला,सा
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आ’त्म,ह’त्या गरेको नभई उनको ह’त्या भएको आशंकासहित परिवारजनले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन् ।मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा आइतबार झु,न्डि,ए,को अवस्थामा भेटिएका राजपुतले आ,त्म,ह,त्या गरेको बताइरहँदा परिवारजनले भने ह,त्या,को आशंका गर्दै निष्पक्ष छानविनका लागि प्रहरीलाई आ,ग्रह गरेका हुन् ।
राजपुतले आ,त्म,ह,त्या गरे भन्ने विश्वास नरहेको बताउँदै मामा आरसी सिंहले घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुरोध गरेका हुन् । प्रहरीले भने घटनाको प्रकृतिले अहिलेसम्म ह’त्या भएको बताउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा उनले ‘दिल बेचारा’ नामक चलचित्रमा अभिनय गरेका थिए । यो नै उनको अन्तिम चलचित्र भएको छ । ३४ वर्षीय राजपुतले फिल्म ‘काइ पो चे’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेका थिए।फिल्ममा आउनुअघि उनी टेलिश्रृंखलामा काम गर्थे। सन् २००८ मा स्टारप्लसको ‘किस देशमे है मेरा दिल’ बाट टिभीमा डेब्यु गरेका उनले जिटिभीको ‘पवित्र रिश्ता’बाट निकै चर्चा पाएका थिए। टिभीका विभिन्न कार्यक्रममा देखिँदै आएका उनी सन् २०१३ मा ‘काइ पो चे’ फिल्ममा देखिए। यही फिल्मबाट उनी ‘फिल्म फेयर अवार्ड फर बेस्ट मेल डेब्यू’ मा मनोनित पनि भए।
त्यही वर्ष उनले ‘शु,द्ध देशी रोमान्स’ मा काम गरे। सन् २०१५ मा ‘डिडेक्टिभ बोमकेश बक्षी’ मा देखिएका उनले सन् २०१६ मा भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको बायोपिकमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरे। ‘एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ का लागि उनले उनी ‘फिल्म फेयर अवार्ड फर बेस्ट एक्टर’ मा पनि मनोनित भए। यसबीच उनी ‘रब्ता’, ‘केदारनाथ’, ‘सोनचिरिया’, ‘ड्राइभ’ देखिए।
यी तीनमध्ये एक जनाले अंकलसँग ऋण माग्ने, अर्काले हिसाब-किताबको जिम्मेवारी सम्हाल्ने काम गर्छन्। पूर्व जिल्लास्तरीय क्रिकेटर इशान युवाहरूलाई क्रिकेट सिकाउने काम गर्छन्। उनीहरूको काम र जीवन ठिकठाक चलिरहेको हुन्छ। तर सामाजिक राजनीतक घ,ट,ना,क्रमले उनीहरुको वर्षौंको मित्रता र काममा संकट ल्याउँछ।सन् २००० आसपासको परिवेश समेट्ने यो फिल्ममा २००१ को भुइँचालोदेखि २००२ को गुजरातको धार्मिक जातीय दंगासम्मका सन्दर्भ जोडिएको छ।
एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी (२०१६), निर्देशक: नीरज पान्डे महेन्द्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेटका सम्भवतः सर्वाधिक सफल र लोकप्रिय क्याप्टेन हुन्। आफ्नो नेतृत्वमा उनले क्रिकेटका सबै खाले ठूला प्रतियोगिता जितेर इ,तिहास र,चेका छन्। ‘एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी’ उनै सफल क्रिकेटरको जीवनका महत्वपूर्ण घटना समेटिएका छन्। धोनीको भूमिकामा सुशान्तको अभिनय छ।
२०११ मा श्रीलंकाविरुद्धको विश्वकप फाइनल खेलमा धोनीले युवराज सिंहलाई नपठाएर आफैं मैदानमा उत्रेका थिए। यो फिल्मको आरम्भ विश्वकप २०११ को त्यही सन्दर्भबाट हुन्छ। धोनीको खेल जीवन र निजी जीवनका कथालाई सँगसँगै देखाइएको यो फिल्मले त्यसपछि दर्शकलाई तीन दशकअघिको समयमा पुर्‍याउँछ। उनको जीवनमा परिवार, साथीसंगीदेखि प्रशिक्षकको भूमिकाको म,ह,त्व पनि देखाइएको छ।
यो फिल्मको कथा अनिरुद्ध पाठकका छोरा गौरवबाट सुरू हुन्छ। कलेज टपर आमाबुबाका सन्तान गौरव इन्जिनियरिङमा नाम निकाल्न मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन्। अभिभावकजस्तै टपर बन्ने सपना पालेका उनी सोचेजस्तो रिजल्ट नआएपछि आ,त्म,ह,त्या,को प्रयास गर्छन्।
यो घ,ट,ना,पछि बल्ल ‘छि,छो,रे’को मूल कथा सुरू हुन्छ। यो कथा फ्ल्यासब्याकमा देखाइएको छ। यो कथाले गौरवका बुवाआमा (सुशान्तसिंह र श्रद्धा कपुर) र उनीहरूका साथीसंगीको जीवनका रमाइलो र संघर्षका पाटो समेटेको छ। विद्यार्थीकालको होस्टल जीवनका उज्याला-अध्याँरा पाटो देखाइएको यो फिल्ममा कलेजकालीन र्‍यागिङ, बुलिइङ, मित्रता र प्रेमका कुरा रोचक तरिकाले देखाएको छ। यसमा धनी र गरिब विद्यार्थी बीचको वर्ग भेद र प्रतिस्पर्धा पनि देख्न पाइन्छ।
व्यवसायिक र समीक्षक दुवैको नजरमा सकारात्मक प्रतिक्रिया बटुल्न सफल यो फिल्मले आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने सन्देश बोकेको छ। तर विडम्बना छोरालाई आशावादी बनाउने च,रि,त्र नि,र्वा,ह गरेका उनै सुशान्तले आ’त्मह’त्या,को बाटो रोजे। पर्दाभित्रको च,रि,त्र र वास्तविक जीवनबीच कस्तो ननिको वि,रो,धा,भा,स